बुधबार साँझ चन्द्रग्रहण
बुधबार खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । यो ग्रहण नेपालबाट पनि देखिनेछ । यो चन्द्रग्रहण नेपालको काठमाडौंमा माघ १७ गते साँझ ५ः३३ मिनेटमा प्रारम्भ हुनेछ, तर यो दृश्य नेपालबाट देखिनेछैन ।
किशोरी किशोरीबीच बिहे !
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका सिम्लीमा परम्परादेखि चल्दै आएको पापीनी मेलामा यसवर्ष पनि किशोरी किशोरीबीच बिहे भएको छ ।
आउँदैछ ३.२ गिगापिक्सेलको क्यामरा
विश्वमा ब्रह्माण्डको हाइभिफिनेसन तस्वीर खिच्ने क्यामरा छ की छैन होला? यसको उत्तर हो छैन । स्याटेलाइटको सहयोगले ठिक्क गुणस्तरका तस्वीर मात्र खिच्न सम्भव प्रविधि उपलब्ध भइरहे पनि हालसम्म पृथ्वीलाई एउटै फ्रेमभित्र राखेर हाइडिभिनेसनको फोटो खिच्ने क्यामरा हाल नभए पनि तयार भने भैरहेको खबर छ । यो क्यामराले मेगापिक्सेलमा हैन गिगापिक्सेलमा फोटो खिच्नेछ ।
ओलम्पिक सहभागीलाई निःशुल्क नोट–८
दक्षिण कोरियाली प्रविधि कम्पनी सामसङले आगामी महिना आफ्नो मुलुकमा आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडी अधिकारीलाई निःशुल्क रूपमा ग्यालेक्सी नोट–८ दिने जनाएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक बुलेट साइकलको बिक्री नेपालगन्जबाट सुरु
मोजा गनाएको सहन नसक्दा १० वर्ष जेलको बास
गनाउने मोजा जो कोहीलाई पनि टाउको दुखाईको विषय हुन सक्छ । तर यो लगाउने मानिसले सामुन्ने बसेको मानिसको कुरा सुनेन भने अवस्था खतरनाक पनि हुन सक्छ । रुसमा यस्तै भएको छ । रुसमा विमानमा यात्रा गरिरहेको समयमा गनाउने मोजा खोलेपछि दुई यात्रुबीच झगडानै भएको छ ।
मोबाइल रिचार्ज गरेको कार्ड र सुर्तीको खोल फाल्ने गर्नुभएको छ भने अब नफाल्नुहोस् । जम्मा गरेर बुझाए पैसा पाउनुहुन्छ । उपत्यकामा चलिरहेको चक्रपथ सफाइ अभियानका तर्फबाट मोबाइल रिचार्ज गरेर फ्याँक्ने २०० वटा खोल ल्याए ५० रुपैयाँ र सुर्ती एवं गुट्खाका खोल ५०० वटा ल्याए १०० रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ ।
एभिएसन म्युजियम सर्वसाधारणलाई खुला
एभिएसन म्युजियम सर्वसाधारणलाई खुला कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १० मंसिर काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको ‘एभिएसन म्युजियम’ सोमबारदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुला हुने भएको छ । तीन साताअघि ‘सफ्ट लञ्च’ गरी विद्यार्थीका लागि मात्र खुला गरिएको म्युजियम सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिएको यसका संस्थापक वेद उप्रेतीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सर्वसाधारणको बढ्दो चासो र सफ्ट लञ्चपछि यसमा भ्रमण गर्नेको उत्साहका कारण यसलाई खुला गर्न लागिएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वेद उप्रेती ट्रष्टले निर्माण गरेको यो म्युजियम एयरबस ३३०–३०० मा निर्माण गरिएको संसारकै एकमात्र म्युजियमसमेत हो । उप्रेतीका अनुसार तीन सातामा ५० हजार विद्यार्थीले म्युजियम अवलोकन गरेका छन् । कात्तिक १९ गतेदेखि विद्यार्थीका लागि खुला गरिएको म्युजियममा मंसिर ९ गतेसम्म ५० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले अवलोकन गरको उनले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । “तीन हप्तामा ५० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले अवलोकन गर्नुलाई हामीले म्युजियमप्रति ठूलो उत्साह र जिज्ञासा रहेको महशुस गरेका छौं,” उनले भने । म्युजियम निर्माणका लागि ट्रष्टले मात्र आर्थिक लगानी गरेको र यसका लागि करिब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । म्युजियम प्रवेश गर्न सर्वसाधारणका लागि २ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने विद्यार्थीलाई १ सय २५ रुपैयाँ शुल्क रहेको छ । यस्तै, फरक क्षमता भएका (अपांग)हरूका लागि १ सय २५ रुपैयाँ तथा सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई २ सय ५० र विदेशीलाई ५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको जनाइएको छ । टर्किस एयरको मानवीय क्षतिरहित दुर्घटनाबाट ग्राउण्डेड भएको यो जहाजलाई स्क्र्याप नगरी म्युजियम निर्माण गरिएको घटनाले नेपालीको शीर विश्वसामु उँचो भएको कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णले बताए । उनले भने, “यो जहाज इन्डियामा लगेर कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेन, हामीले त्यो अवस्था आउन दिएनौं ।” उनले वेद उप्रेती ट्रष्टको रचनात्मक काम भएकै कारण प्राधिकरणले सहकार्य गरेको स्मरण गर्दै यसबाट मुलुकमा विमानका विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि स्रोतअभाव नहुने धारणा राखे । “विमानस्थलसम्म प्रवेश पहुँच नहुने र जहाज चढ्ने अवसर नपाएकाहरूका लागि यो म्युजियमले धेरै कुरा सिकाउँछ,” उनले भने । यस्तै प्राधिकरणका अर्का निर्देशक बाबुराम पौडेलले उड्डयन क्षेत्रमा जनशक्ति विकासका लागि विद्यार्थीलाई यसबाट आकर्षित गर्न सकिने बताए । म्युजियमले तेक्वान्दो खेलाडी दिपक विष्टलाई ब्राण्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको छ । यसअघि विद्यार्थीका लागि मात्रै उक्त म्युजियम खुला गरिएको थियो । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि उक्त म्युजियम निशुल्क प्रवेश गर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ भने अन्य तहका विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिइने जनाइएको छ । यस्तै, १५ जना विद्यार्थीसँग जाने एक शिक्षकलाई निशुल्क प्रवेश दिइने जनाइएको छ । २५ कर्मचारी कार्यरत म्युजियममा म्युजियम एटेन्डेन्डहरू एयर होस्टेजको युनिफर्म लगाएर आगन्तुकको स्वागत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । म्युजियममा ७ वटा हल छन् । यी हलहरूमा राइट दाजुभाइले निर्माण गरेकोदेखि अहिलेसम्मका ३५० भन्दा बढी ‘मिनिएचर’ मोडल एयरक्राफ्ट राखिएको छ । एयरबस–३३० को ग्लास ‘ककपिट’, आधुनिक लडाकु विमान, व्यापारिक एयरलाइन्सका विमान, नेपाल वायुसेवा निगमले उडान सुरु गर्दाको हवाई सेवा तथा नेपालमा उडेका जहाज, इक्विरेल हेलिकोप्टरका मोडल र क्याप्टेन उप्रेतीले आकाशबाट खिचेका एरियल तस्बिर रहेका छन् । उप्रेतीले यसअघि कैलालीको धनगढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा नेपालमै पहिलो ‘एयरक्राफ्ट म्युजियम’ २०७२ देखि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । एभिएसन म्युजियमको आम्दानी क्यान्सरपीडितका लागि खर्च गर्ने उनको योजना छ ।
यो हो संसारकै सबभन्दा छिटो कुद्ने कार !
काठमाडौं: संसारकै तिव्र गतीमा कुद्ने कारको आविष्कार गरिएको छ । स्पोर्ट्स कार बनाउने स्विडिश कम्पनी कोएनिग्सएगको अगेरा आरएस हाईपरकारले विश्वकीर्तिमान बनाएको छ । यसले बुगाटी काइरोनको कीर्तिमान भंग गर्दै तिव्र गतिमा कुद्ने कार निर्माण गरेको हो । स्विडिसले बनाएको कारले ३६।४४ सेकेन्डमा ४०० किलोमिटर प्रतिघन्टाको स्पीड समात्यो र फेरि शून्य किलोमिटर प्रतिघन्टामा आयो । हाईपरकार लगभग साढे दुई किलोमिटर गुड्यो ।
२५ सय डलरको ल्यापटप ३० डलरमा !
मेक्सिकोमा अधिकारीहरुले कम्प्यूटर कम्पनी डेललाई आफ्नो विज्ञापनमा देखाइए अनुसारको वाचा पुरा गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशपछि डेलले आफ्नो गल्तीले देखाएको एक विज्ञापन अनुसार अब २५०० डलर पर्ने ल्यापटप केबल ३० डलरमा दिनुपर्ने भएको छ।
जब म्युजिक भिडियोमा कैद भयो आत्महत्याको दृश्य (भिडियोसहित)
कुनै म्युजिक भिडियो कसैको आत्महत्याको प्रमाण बन्न पुगेको कुरा पहिलो पटक सामुन्ने आएको छ। यो म्युजिक भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियो मलेसियाको रेड पिपुल सुपरग‍्रुपले बनाएको हो । यसमा एक गायिका फरक फरक स्थानमा अभिनयसहित गीत गाइरहेको देखाइएको छ । तर, यो म्युजिक भिडियोमा कसैले आत्महत्या गरिरहेको दृश्य पनि कैद भइरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन ।
छोरीको हत्या अभियोगमा जेल पुगेर छोरी नै जन्माइन्
सात वर्षीया छोरीको हत्या अभियोगमा जिल्ला कारागार रोल्पाको बन्दीगृहमा रहेकी एक महिलाले आज छोरी जन्माएकी छिन् ।
यी हुन् तेस्रो विश्व युद्धका हतियार ! रूसले उतार्यो आणविक रेल र रोबोट ट्यांक
के विश्व तेस्रो विश्व युद्धतर्फ लम्किरहेको हो ? हाललै रूसको सेनाको तयारलाई आँखा लगाउने हो भने केही यस्तै तस्विर देख्न पाइन्छ । रूसले पोल्यान्डको सीमानामा 'रोबोट ट्यांक' तैनाथ गरेको छ। रुसले अर्कातिर 'आणविक रे' बाट मिसाइल हानेर नेटोलाई आफ्नो शक्तिबारे पनि महसुस गराउन सफल भएको छ। रूसको तर्फबाट प्रशांत महासागरस्थित विवादित कुरिल द्वीपमा एन्टी-शिप मिसाइल तैनाथ गरिएपछि जापानले पनि हतियार तैनाथ गरेको छ । रूसले हाइपरसोनिक आणविक मिसाइलको पनि परीक्षण गरेको । जुन मिसाइल १३ मिनेटभित्रै बेलायत पुग्न सक्छ ।